अत्यधिक व्यस्तताले ल्याएको अस्तव्यस्तताले दिने मानसिक तनाव र नकारात्मकताका कारण देखा पर्ने विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक कमजोरीहरूको असर मानिसहरूको यौन क्षमतामा देखा परिराखेको छ । कातिर तनावपूर्ण जीवनशैलीका कारण पुरुषहरूमा समस्या देखा परिराखेको छ भने अर्कोतिर महिलाहरूमा पनि कामेक्षाको कमी र कामेक्षा भएका बेला पनि पुरुष साथीबाट सन्तुष्ट हुन नसकेर कुण्ठाग्रस्त हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ […]
यौन सम्बन्धपछि युवतीहरुमा देखिन्छ यस्ता परिवर्तनहरु
यौनले कुनै पनि सम्बन्धमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । इमोशन्सका साथ जोडीका बीचको सम्बन्धलाई पनि यसले प्रभावित पार्ने गरेको छ । यौनले मानिसमा धेरै प्रकारका परिवर्तनहरु हुन जान्छ । जसमा यौनले युवतीहरुलाई बढी मात्रामा प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । यौन सम्बन्ध शुरु गरेपछि युवतीहरुको शरीरमा कयौं प्रकारका परिवर्तन आउँछन् । ती मध्ये केहीलाई हामी यहाँ उल्लेख गर्दै […]
यस्ता हुन्छन् सेक्सको अत्यन्तै भोका महिलाहरु
संसारभरी नै एउटा मान्यता छ महिलालाई बुझ्न कठिन हुन्छ । केटीहरु कम बोलेर धेरै कुरा भन्छन् । पुरुषले महिलाका कुरा केवल बोलीबाट मात्र बुझ्न सक्दैनन् । उनीहरुको ब्यवहार पनि बुझ्नु महत्वपूर्ण हुन्छन् । महिलाले यौनिक चाहना पनि शब्दमै ब्यक्त नगर्ने एक अध्यनले देखाएको छ । यहाँ महिलाले यौन सम्बन्ध राख्न चाहेको समयमा देखाउने ५ ब्यवहारको […]
केटाहरु कन्डम प्रयोग नगर्नुका कारणहरु
सन् २००२ देखि २०१० सम्ममा आफ्नो पहिलो यौन सम्पर्कको समयमा करिब ८० प्रतिशत युवाले कन्डमको प्रयोग गर्ने बताएका थिए । तर हालै गरिएको अध्ययनले सो संख्या घटेको देखाएको छ ।उक्त अनुसन्धानका प्रमुख डेबी हेर्बिनिकले युवामा कन्डमको बारेमा गलत धारणा रहेको तथा उनीहरुमा गर्भ रोक्न मात्र कन्डम प्रयोग हुने बुझाइ रहेको बताइन् । साथै उनले युवाहरुमा […]
युवतीहरुले यी तीन राशी भएका पुरुषलाई पाउन गर्छन् मरिहत्ते
ज्योतिष शास्त्र अनुसार व्यक्तिको भविष्य जन्मकुण्डी र राशी अनुसार पत्ता लगाउन सकिन्छ । ज्योतिषहरुले नै व्यक्तिको भविष्य कस्तो जीवन साथी असल हुन्छन् भन्ने बारे बताएको हुन्छ । जीवन जीउन जो कोहीको लागि असल साथीको खाँचो पर्छ । सुख दुख साट्ने एउटा माध्यम हो प्रेमी प्रेमीका । प्रेमको विषयलाई लिएर केटा मान्छेले भन्दा धेरै केटी मान्छेलो […]
युवतीहरु पहिलोपटक यौन सम्पर्क गर्दा किन डराउँछन् ? यस्ता छन् कारण र उपाय
युवतीहरुलाई यौनसम्पर्क गर्न इच्छा, चाहना भए पनि तिनीहरु यौनसम्पर्क एकदमै डराउँछन् ।यौन सम्पर्क गर्दा तिनीहरुलाई केही गर्ने आँट वा हिम्मत नआउने, आफसे आफ आत्मबल घटेर जाने हुन्छ जसले गर्दा कसैसँग पनि यौन सम्पर्क गर्न चाहदैनन् । यौन सम्पर्कको भय तपाईलाई थाहै होला कि विभिन्न परिस्थिति हुन्छन् जुन परिस्थितिमा व्यक्तिलाई डर लाग्छ । यो एउटा स्वाभाविक […]
यौन सम्पर्क गर्नु अघि झुक्किएर पनि खान नहुने यी ५ खानेकुरा !
तारेको खाना तारेको वा भुटेको खानले टेस्टेस्टोरनको लेभल र सर्कुलेसनमा नकारात्मक असर पुर्याउँछ। तेल र नुनको मिश्रणले पेट फुल्छ, असहज महसुस गराउँछ । तारेर खानुको सट्टा पकाएर तथा उसिनेर खानु फाइदाजनक हुन्छ । पिज्जा पिज्जामा गहुँको मिश्रण हुन्छ जसलाई खाएपछि पेट बढ्छ । यसले अनौठो गन्ध छोड्छ, स्वास गन्हाउँछ । सोडा भएका पेयपदार्थ सोडा भएका […]
थाहा पाउनुहोस्, तेस्रोलिङ्गी मानिसलाई यौन चाहना हुन्छ कि हुदैन ?
तेस्रो लिङ्गी मानिसलाई यौन अन्य मानिस सरह नै चाहना हुन्छ । तर, उनीहरुको यौन चाहना पुरा गर्ने क्रियाकलाप भने फरक हुन्छ । उनीहरुले महिलाले महिलासँग र पुरुषले पुरुषसँगै यौन चाहना पुरा गर्छन् । यस्ता महिलालाई ‘लेस्वीयन’ र पुरुषलाई ‘गे’ भनिन्छ । उनीहरुले आफ्नो यौन साथीको यौनाङ्ग चलाएर, यौनाङ्गमा चुम्बन गरेर, मुख तथा गुद्धद्धार मैथुनलगायतका क्रियाकलाप […]
यौन सम्पर्क लामो समयसम्म कसरी टिकाउने ? जानीराखौ
यौन क्रियाकलापको बारेमा धेरैका धेरैथरी मत छ । खासमा यो व्यक्तिको निजी मामिला पनि हो । तर, यहि विषयलाई लिएर व्यक्तिले धेरै टाउको दुखाई रहेको पाइन्छ । खासमा शारीरिक क्रियाकलापमा सहभागी हुँदै गर्दा कति समयमा स्खलन हुनु सामान्य हो भनेर । नेपालमा यसको अनुसन्धान भइसकेको छैन तर पश्चिमा देशमा भने यौन क्रियाकलाप गरिरहेका पार्टनरबीचको सामान्य […]
पहिलोपटक सेक्स गर्नेबेला केटा होस् या केटी दुबै आत्तिने गर्छन् वा उनीहरुमा एकप्रकारको डर पैदा हुन्छ । पहिलोपटक सेक्स गर्दा घबराहट पैदा नहोस् भनेर केही खास कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ । खासगरी पुरुषहरुले पहिलोपटक सेक्स गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? कन्डम नभुल्नुस् तपाई पहिलोपटक सेक्स गर्दै हुनुहुन्छ भने दिमागमा कुनै पनि डर वा […]
सेक्स सम्बन्धि अनौठा ५ वटा नयाँ नियमहरु
यौनका विषयमा विश्वका हरेक देशमा आ आफ्ना मान्यता, धारणा, परम्परा तथा कानून छन् । कहीँ सेक्सको विषयमा समाज निकै खुला हुन्छ भने कतिपय देशमा कानुन निकै कडा हुन्छ । सेक्सको विषयमा आ-आफ्नै देशको आ-आफ्नै परम्पारगत नियम कानुन बनाएका हुन्छन् जुन सुन्दा तपाइँहामीलाई हाँसो उठ्छ । जान्नुहोस् सेक्सका यी अनौठा ५ नयाँ नियम : बोलिभियाको सान्ता […]
पुरुषका यी संवेदनशिल अंग प्रति महिला आकर्षित हुन्छन्
पुरूषहरू महिलाप्रति र उनीहरूको शरिरप्रति आकर्षित हुन्छन् । तर, महिलाहरू पनि पुरूष र पुरूषको शरिरप्रति आकर्षित हुने गर्छन् । अध्ययनबाट के पत्ता लागेको छ भने पुरूषहरू महिलाप्रति आकर्षित हुन्छन् भने महिलाहरू ओछ्यानमा पुरूषसँग बढी आकर्षित हुन्छन् । पुरूषहरूको विभिन्न अंगप्रति महिलाको निकै आकर्षण हुने गर्छ भने उनीहरू उत्तेजित समेत हुने गर्छन् । थाहा पाऔ महिलाहरू […]
थाहा पाउनुसहोस्, सेक्स गरेपछि पुरुषले किन कोल्टे फेर्छन् ?
यौन सम्पर्कपछि प्रायः पुरुषहरू महिला साथीसँग टाढिन खोज्छन् वा कोल्टे फर्केर सुत्ने गर्छन् । यसतो किन हुन्छ भन्ने प्रश्न कुनै महिला मित्रको मनमा कहिल्यै उठेको छ कि ? छ भने यहाँ त्यही प्रश्नको उत्तर पहिल्याउने प्रयास गरिएको छ । यौनसम्पर्कले दुई विपरीत लिंगीबीचको घनिष्टता एवं अन्तरंग सम्बन्धलाई दर्शाउँछ, जहाँ आफ्नो पार्टनरका साथ उत्कृष्ट पलको महसुस […]
महिलाहरुले नियमित सेक्स गरेको कसरि थाहा पाउने
महिलाहरु प्राकृति रुपमा नै आफैमा सुन्दर हुन्छन् । उहीहरुको सुन्दरताको सदाबहार तारिफ नै हुन्छ । तर पुरुषको तुलनामा महिलाको शारीरिक बिहे लगत्तै नै परिवर्तन भइहाल्छ । के कारण छ त्यसको पछाडी ? सर्वे युनिभर्सिटी अफ लिड्स का सोधकर्ताले हालै गरेको अध्ययनका अनुसार नियमित सेक्स गर्ने महिलाको शारीरिक बनावट केही मात्रामा परिवर्तन भए पनि एक दिनमा […]
यदि विवाहपछि यौन चाहना नभए के गर्ने ?
यौन चाहना नहुने विभिन्न कारण हुन्छन् । जसमध्ये सबैभन्दा प्रमुख कारण रागरसको गडबडी हो । त्यस्तै व्यक्तिले उच्च रक्तचाप, मनोद्दिपक (मानसिक रोग) को औषधि र मधुमेहको औषधि सेवन गरेको अवस्थामा पनि उसमा यौन चाहना नआउन सक्छ । यसका साथै आफ्नो दिनचर्या निकै व्यस्त हुने व्यक्तिमा थकान र विभिन्न तनावले मानसिक रुपमा तयार नहुनाले पनि व्यक्तिमा […]
यौन सम्पर्कमा वढी आनन्ददायी उमेर कुन हो ?
मानिसको उमेरले यौन सम्बन्धमा पनि प्रभाव पार्ने गर्दछ । उमेर सँगै यौन क्रियाकलापमा अर्थात रोमान्चकता र आनन्ददायक अनुभवमा असर पर्ने हुन्छ । उमेर अनुसार कुन उमेरमा अथवा कुन उमेर समुहमा मानिसको यौन सक्षमता बढी हुन्छ भन्ने कौतुहल हुनु स्वभाविक नै हो । एक यौन खेलौना उत्पादक कम्पनीले अनलाइन मार्फत अध्ययन गर्दै कुन उमेरको यौन सम्बन्ध […]
यो दुनियामा जन्म–मृत्यु जस्तै प्रक्रिया सेक्सको पनि हुन्छ । सृष्टिका सृजना गर्नको लागि यसको जरूरत छ र यो गर्न कसैलाई सिकाउनु पर्दैन् । जसरी मानिस चल्न, बोल्न, हिड्न आफै सिक्छ, त्यसरी नै सेक्स पनि सँगसँगै सिकिन्छ । मानव जीवनमा यति महत्व राख्ने सेक्सका बारेमा केही कुराहरु मानिसले जान्नैपर्ने हुन्छ, जून कुराहरु धेरै थाहा नभएको हुन […]
मानिसहरुको सबैको आ-आफ्नो फरक-फरक स्वभाव,आचरण बानी हुन्छ । यसैगरी यौनिक मामलामा पनि मानिसहरुमा फरक-फरक गुण र ब्यवहार हुन्छन् । ज्यौतिषशास्त्रका अनुसार यौनिक ब्यवहार फरक हुनुको कारण राशि हो । मेष राशिका मान्छे छिट्टै आवेशमा मेष राशिका मानिसमा कामुकता अत्याधिक हुन्छ । तर लामो समयसम्म यौन सम्बन्ध राखिरहन भने मन पराउँदैनन् ।यो राशिका मानिसहरु कम समयमा […]
कसरी पुरुषको यौन क्षमता महिलाले सुँघेरै थाहा पाउँछन् ?
कुनैपनि पुरुषमा पुरुषत्व(मर्द पना) कति छ ? अर्थात् यौन क्षमता कति छ भन्ने कुरा महिलाले सुँघेरै थाहा पाउछन् । अध्ययन अनुसार आफ्नो प्रजनन चक्रको चरम सिमामा रहेका महिलाहरुले सेक्स हर्मोनका कारण पुरुषका सरीरबाट आउने विशेष गन्ध सुँघेर पत्ता लगाउँछन् र टेष्टेस्टेरोन हर्मोन बढि भएका पुरुषप्रति बढि आकषिर्त हुन्छन् । अध्ययनका क्रममा पुरुषमा टेष्टेस्टेरोन र कोर्टिसोल […]
गर्भ रहन धेरै कुराको तालमेल मिल्नुपर्छ । कतिपय स्थितिमा पहिलो वा एक मात्र यौनसम्पर्कमा नै गर्भ रहन्छ, तर सधै यस्तो हुँदैन । यौनसम्पर्क का बेला पुरुषको वीर्यस्लखलन हुँदा निस्किएका करोडौं शुक्रकीटमध्ये केही पाठेघरको मुख हुँदै पाठेघर र त्यसपछि डिम्बबाहिनी नलीमा पुग्छन् । त्यहाँ परिपक्व भएको डिम्ब अण्डासँग असंख्य शुक्रकीटमध्ये एकको मात्र मिलन हुन्छ । सामान्य […]